Izinqolobane ZESIMPENDULO - Izwi Lamanje
A uphawu esakhiweni se-State Capitol e-Illinois, e-USA, esiboniswe ngokugqamile phambi kombukiso kaKhisimusi, funda:
Ngesikhathi solstice wasebusika, vumela isizathu siphumelele. Abekho onkulunkulu, abekho odeveli, izingelosi, izulu noma isihogo. Kukhona umhlaba wethu wemvelo kuphela. Inkolo yizinganekwane nje nezinkoleloze ezenza lukhuni izinhliziyo futhi zigqilaze izingqondo. -ubaboku, Disemba 23, 2009
Ezinye izingqondo ezithuthukayo zingathanda ukuthi sikholelwe ukuthi ukulandisa kukaKhisimusi kuyindaba nje. Ukuthi ukufa nokuvuka kukaJesu Kristu, ukunyukela kwaKhe ezulwini, kanye nokubuya Kwakhe kwesibili kumane kuyinganekwane. Ukuthi iSonto liyisikhungo sabantu esakhiwe ngamadoda ukugqilaza izingqondo zabantu ababuthakathaka, nokubeka uhlelo lwezinkolelo ezilawula ziphike isintu inkululeko yangempela.
Yisho-ke, ngenjongo yokuphikisana, ukuthi umbhali walesi sibonakaliso uqinisile. Ukuthi uKristu ungamanga, ubuKatolika buyinganekwane, futhi ithemba lobuKristu liyinganekwane. Bese ngithi lokhu…
Ukushintsha Amasiko Akithi
I-Rose eyimfihlakalo, nguTianna (Mallett) Williams
IT kwaba utshani bokugcina. Lapho ngifunda i- imininingwane yochungechunge olusha lekhathuni yethulwe kuNetflix eyenza izingane zibe nezocansi, ngikhansele ukubhalisa kwami. Yebo, banamadokhumentari amahle esizowaphuthelwa… Kepha ingxenye ye- Ukuphuma eBabiloni kusho ukwenza izinqumo ezikhethiwe ngokoqobo ukubandakanya ukungabambi iqhaza noma ukusekela uhlelo oluthi lufake isiko ubuthi. Njengoba kusho kumaHubo 1:Qhubeka ukufunda →
Ukukhokhiswa yi-Sun Miracle Skeptics
Isimo kusuka Usuku lwesithupha
THE imvula yachitha umhlaba futhi yanisela izixuku. Kumelwe ukuthi kwakubonakala kuyisibabazo ekuhlekelweni usulu okwakugcwele emaphephandabeni omhlaba ezinyangeni ezedlule. Izingane ezintathu ezingabelusi ngaseFatima, ePortugal zathi isimangaliso sizokwenzeka emasimini aseCova da Ira emini enkulu ngalolo suku. Kwakungo-Okthoba 13, 1917. Abantu abangafika ku-30, 000 kuya ku-100, 000 babebuthene ukuzobona lokhu.
Emazingeni abo bekukhona abakholwayo nabangakholwa, izalukazi ezizikhonzile nezinsizwa ezihlekisayo. —Fr. UJohn De Marchi, Umpristi nomcwaningi wase-Italy; Inhliziyo Engaphelele, 1952
Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 25, 2010.
FOR amashumi eminyaka manje, njengoba ngiphawulile Lapho uMbuso Ujezisa Ukuhlukunyezwa Kwezingane, AmaKatolika kuye kwadingeka akhuthazelele ukusakazwa okungapheli kwezihloko zezindaba ezimemezela amahlazo ngemuva kwehlazo lobupristi. “UmPristi Usolwa Nge…”, “Vala Up”, “Umhlukumezi Ususwe Kusuka EPherishi Kuya EPherishi…” njalo njalo. Kubuhlungu, hhayi kuphela kulabo abathembekile, kepha nakwabanye abapristi. Kuwukusetshenziswa kabi kwamandla okunje okuvela endodeni ngomuntu Christi—ku umuntu kaKristu- lowo uvame ukushiywa ethule emangele, ezama ukuqonda ukuthi lokhu akuyona nje into engajwayelekile lapha nalaphaya, kodwa yemvamisa enkulu kakhulu kunalokho obekucatshangwa kuqala.
Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo kuye kungakholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethenjelwa njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, iphe. I-25
Posted on Mashi 28, 2017 April 17, 2017 by Mark
UJesu Ehamba Phezu Kwamanzi ngu-Michael D. O'Brien
LAPHO ingqikithi eyisisekelo engizama ukuyifaka kuzo zonke izici zenkonzo yami: Ungesabi! Ngoba kuthwala ngaphakathi kwayo imbewu yeqiniso kanye nethemba:
LOKHU iLent edlule ibiyisibusiso kimi ukuhamba namashumi ezinkulungwane zabapristi kanye nabantu abavamile ngokufanayo emhlabeni wonke ngokuzindla kweMisa kwansuku zonke engikubhalile. Kwakuthokozisa futhi kuyakhathaza ngasikhathi sinye. Ngakho-ke, ngidinga ukuthatha isikhathi esithile ngithule ngicabange ngezinto eziningi enkonzweni yami nohambo lwami uqobo, nendlela uNkulunkulu angibiza ngayo.
Ingabe uNkulunkulu Uthule?
UNkulunkulu axolele i-USA. Imvamisa ngingaqala ngoNkulunkulu abusise i-USA, kepha namuhla omunye wethu angamcela kanjani ukuthi abusise okwenzeka lapha? Siphila ezweni elikhula ngokuya liba mnyama. Ukukhanya kothando kuyaphela, futhi kuthatha wonke amandla ami ukugcina leli langabi elincane livutha enhliziyweni yami. Kepha ngoJesu, ngiyigcina ivutha namanje. Ngincenga uNkulunkulu uBaba wethu ukuthi angisize ngiqonde, futhi ngibone ukuthi kwenzekani emhlabeni wethu, kepha yena uthule ngokuzumayo. Ngibheka kulabo baprofethi abathembekile balezi zinsuku engikholwa ukuthi bakhuluma iqiniso; wena, nabanye amabhulogi abo nemibhalo engingayifunda nsuku zonke ukuthola amandla nokuhlakanipha nokukhuthazeka. Kodwa nonke nithule. Okuthunyelwe obekuzovela nsuku zonke, kuphendukele kuviki, bese kuba nyangazonke, futhi kwezinye izimo minyaka yonke. Ngabe uNkulunkulu useyekile ukukhuluma nathi sonke? Ingabe uNkulunkulu ubususile ubuso Bakhe obungcwele kithina? Angithi nje ubungcwele bakhe obuphelele babekezelela kanjani ukubheka isono sethu…?
I-Podcast: Google ewindini elisha | Thwebula
IN ukushintshaniswa kwencwadi kwakamuva, ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu wathi kimi,
Uma ngikhonjiswa ubufakazi obanele, ngingaqala ukufakaza ngoJesu kusasa. Angazi ukuthi lobo bufakazi bungaba yini, kodwa ngineqiniso lokuthi unkulunkulu onamandla onke, owazi konke njengoYahweh uzokwazi ukuthi kuzothathani ukuze ngikholelwe. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi uYahweh akumele afune ngikholwe (okungenani ngalesi sikhathi), ngaphandle kwalokho uYahweh uzongikhombisa ubufakazi.
Ngabe uNkulunkulu akafuni ukuthi lo muntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu akholwe ngalesi sikhathi, noma ingabe lo muntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu akazimisele ukukholwa kuNkulunkulu? Okungukuthi, ingabe usebenzisa imigomo “yendlela yesayensi” kuMdali uqobo Lwakhe?Qhubeka ukufunda →
Posted on April 27, 2010 Kwangathi 24, 2017 by Mark
I ngichithe amasonto ambalwa ngixoxa nomuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Cishe akukho ukuzivocavoca okungcono okwakha ukholo lwakho. Isizathu ukuthi yilokho okungenangqondo kuwuphawu uqobo lwamandla angaphezu kwawemvelo, ngoba ukudideka nokungaboni ngokomoya kuyizimpawu zesikhulu sobumnyama. Kunezimfihlakalo umuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu angakwazi ukuzixazulula, imibuzo angakwazi ukuyiphendula, kanye nezici ezithile zempilo yomuntu kanye nomsuka wendawo yonke ongenakuchazwa yisayensi iyodwa. Kepha lokhu uzokuphika ngokungayinaki le ndaba, anciphise umbuzo osenkingeni, noma anganaki ososayensi abaphikisa isikhundla sakhe futhi abacaphuna kuphela labo abakwenzayo. Ushiya abaningi Izinsimbi ezibuhlungu ngemva “kokucabanga” kwakhe.
Ongakholelwa KuNkulunkulu Omuhle
UPhilip Pullman; Isithombe: Phil Fisk weSunday Telegraph
NGIVUKE ngo-5: 30 namhlanje ekuseni, kuvunguza umoya, kuvunguza iqhwa. Isiphepho esihle sentwasahlobo. Ngakho-ke ngiphonsa ijazi nesigqoko, ngabe sengiphuma ngaya emimoyeni evunguza ukusindisa uNessa, inkomo yethu yobisi. Nginaye ngokuphepha esibayeni, futhi izinzwa zami zivuswe ngonya, ngazulazula ngingena endlini ukuthola i-athikili ethokozisayo ngumuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, uPhilip Pullman.
Ngomuntu obhala isivivinyo kusenesikhathi kanti abanye abafundi basala bejuluka ngenxa yezimpendulo zabo, uMnu. Pullman uchaza kafushane ukuthi wayishiya kanjani insumansumane yobuKrestu ngokuba nengqondo kokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Okungidonsele amehlo kakhulu, kepha, yimpendulo yakhe yokuthi bangaki abazophikisa ukuthi ubukhona bukaKristu buyabonakala, ngokwengxenye, ngokulunga okwenziwe yiSonto Lakhe:
Kodwa-ke, abantu abasebenzisa leyo mpikiswano kubonakala sengathi basikisela ukuthi kuze kube yilapho isonto likhona akekho owake wazi ukuthi ulunga kanjani, futhi akekho noyedwa owayengenza okuhle manje ngaphandle kokuthi bakwenze ngenxa yezizathu zokholo. Angikukholwa nje lokho. - UPhilip Pullman, UFiliphu Pullman kuMuntu Omuhle uJesu & The Scoundrel Christ, www.telegraph.co.uk, Ephreli 9th, 2010
Kepha ingqikithi yalesi sitatimende iyaxaka, futhi empeleni, inikeza umbuzo obucayi: kungaba khona yini umuntu 'omuhle' ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu?
IZILINGO EZINKULU (254)
Archives Khetha Inyanga Kwangathi 2022 (2) Ephreli 2022 (2) Mashi 2022 (5) Februwari 2022 (5) Januwari 2022 (7) UDisemba 2021 (7) Novemba 2021 (7) Okthoba 2021 (6) Septhemba 2021 (5) Agasti 2021 (5) Julayi 2021 (3) Juni 2021 (2) Kwangathi 2021 (6) Ephreli 2021 (6) Mashi 2021 (9) Februwari 2021 (10) Januwari 2021 (9) UDisemba 2020 (9) Novemba 2020 (8) Okthoba 2020 (15) Septhemba 2020 (6) Agasti 2020 (6) Julayi 2020 (10) Juni 2020 (13) Kwangathi 2020 (9) Ephreli 2020 (11) Mashi 2020 (12) Februwari 2020 (7) Januwari 2020 (10) UDisemba 2019 (7) Novemba 2019 (11) Okthoba 2019 (7) Septhemba 2019 (6) Agasti 2019 (1) Julayi 2019 (4) Juni 2019 (6) Kwangathi 2019 (9) Ephreli 2019 (15) Mashi 2019 (5) Februwari 2019 (9) Januwari 2019 (7) UDisemba 2018 (3) Novemba 2018 (10) Okthoba 2018 (8) Septhemba 2018 (5) Agasti 2018 (4) Julayi 2018 (2) Juni 2018 (6) Kwangathi 2018 (13) Ephreli 2018 (10) Mashi 2018 (8) Februwari 2018 (13) Januwari 2018 (11) UDisemba 2017 (10) Novemba 2017 (10) Okthoba 2017 (11) Septhemba 2017 (9) Agasti 2017 (11) Julayi 2017 (9) Juni 2017 (9) Kwangathi 2017 (10) Ephreli 2017 (8) Mashi 2017 (9) Februwari 2017 (8) Januwari 2017 (9) UDisemba 2016 (14) Novemba 2016 (13) Okthoba 2016 (6) Septhemba 2016 (15) Agasti 2016 (7) Julayi 2016 (6) Juni 2016 (8) Kwangathi 2016 (10) Ephreli 2016 (7) Mashi 2016 (25) Februwari 2016 (21) Januwari 2016 (8) UDisemba 2015 (7) Novemba 2015 (9) Okthoba 2015 (11) Septhemba 2015 (9) Agasti 2015 (5) Julayi 2015 (8) Juni 2015 (8) Kwangathi 2015 (9) Ephreli 2015 (9) Mashi 2015 (27) Februwari 2015 (17) Januwari 2015 (11) UDisemba 2014 (10) Novemba 2014 (7) Okthoba 2014 (21) Septhemba 2014 (21) Agasti 2014 (6) Julayi 2014 (6) Juni 2014 (5) Kwangathi 2014 (19) Ephreli 2014 (22) Mashi 2014 (26) Februwari 2014 (24) Januwari 2014 (27) UDisemba 2013 (24) Novemba 2013 (6) Okthoba 2013 (5) Septhemba 2013 (3) Agasti 2013 (2) Julayi 2013 (4) Juni 2013 (1) Kwangathi 2013 (6) Ephreli 2013 (7) Mashi 2013 (11) Februwari 2013 (10) Januwari 2013 (3) UDisemba 2012 (2) Novemba 2012 (3) Okthoba 2012 (3) Septhemba 2012 (5) Agasti 2012 (1) Julayi 2012 (3) Juni 2012 (5) Kwangathi 2012 (2) Ephreli 2012 (5) Mashi 2012 (5) Februwari 2012 (7) Januwari 2012 (6) UDisemba 2011 (8) Novemba 2011 (6) Okthoba 2011 (7) Septhemba 2011 (3) Agasti 2011 (5) Julayi 2011 (4) Juni 2011 (9) Kwangathi 2011 (4) Ephreli 2011 (1) Mashi 2011 (4) Februwari 2011 (3) Januwari 2011 (7) UDisemba 2010 (7) Novemba 2010 (5) Okthoba 2010 (5) Septhemba 2010 (5) Agasti 2010 (3) Julayi 2010 (5) Juni 2010 (7) Kwangathi 2010 (9) Ephreli 2010 (14) Mashi 2010 (8) Februwari 2010 (9) Januwari 2010 (5) UDisemba 2009 (8) Novemba 2009 (6) Okthoba 2009 (5) Septhemba 2009 (4) Agasti 2009 (4) Julayi 2009 (7) Juni 2009 (7) Kwangathi 2009 (5) Ephreli 2009 (8) Mashi 2009 (2) Februwari 2009 (8) Januwari 2009 (13) UDisemba 2008 (10) Novemba 2008 (9) Okthoba 2008 (11) Septhemba 2008 (10) Agasti 2008 (7) Julayi 2008 (2) Juni 2008 (5) Kwangathi 2008 (7) Ephreli 2008 (8) Mashi 2008 (10) Februwari 2008 (7) Januwari 2008 (5) UDisemba 2007 (12) Novemba 2007 (9) Okthoba 2007 (5) Septhemba 2007 (10) Agasti 2007 (8) Julayi 2007 (5) Juni 2007 (5) Kwangathi 2007 (6) Ephreli 2007 (7) Mashi 2007 (4) Februwari 2007 (6) Januwari 2007 (10) UDisemba 2006 (9) Novemba 2006 (10) Okthoba 2006 (10) Septhemba 2006 (24) Agasti 2006 (19) Julayi 2006 (16) Juni 2006 (21) Kwangathi 2006 (17) Ephreli 2006 (19) Mashi 2006 (22) Februwari 2006 (16) Januwari 2006 (16) UDisemba 2005 (10) Novemba 2005 (1) Juni 2005 (1) Ephreli 2003 (1) Mashi 2003 (1)